Momba anay - Chaozhou Chaoan Juyuan Hardware Products Co., Ltd.
JUYUAN Stainless vy vokatra orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana karazana Stainless vy kojakoja fandroana. Izahay dia omena fitaovana famokarana mandroso, teknolojia avo lenta ary rafitra fitantanana ara-tsiansa tonga lafatra.
Ny boaty horonan-taratasy misy ny marika Juyuan dia azo ianteheran'ny mpanjifa amin'ny endrika sy asa tanana vaovao. Manana karazana vokatra isan-karazany amin'ny karazana fepetra rehetra izahay, izay amidy amin'ny faritra maro ao an-toerana. Amin'izay fotoana izay ihany, afaka manamboatra santionany isika araka ny takian'ny mpanjifa ary manome ny serivisy tsara indrindra. Manizingizina izahay fa ny "mpanjifa voalohany sy tsara indrindra" ho fitsipikay. Amin'izay fotoana izay ihany, dia mandinika tsara ny laza sy ny kalitao isika, manantena ny hiara-hiasa amin'ny mpanjifa avy any an-toerana sy any ivelany mba hampivelatra hoavy mamirapiratra miaraka!
Amin'ity taona ity dia manitatra ny tsenan'ny ampitan-dranomasina izahay, nanatrika ny Canton Fair izahay nandritra ny 7 taona, indroa / taona. Nandritra io vanim-potoana io, nihaona tamina mpanjifa tsy tapaka maro avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izahay, ary namorona fiaraha-miasa tena tsara tamin'izy ireo. Tena fifaliana lehibe ho anay izany.
Ny tsenantsika lehibe dia Azia Atsimo-Atsinanana, faritra Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo.
Misaotra betsaka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa rehetra, isaky ny mitaky fitakiana ambony kokoa ianao, dia mampivelatra sy mitombo izahay. Amin'ity roa taona ity dia mampiasa vola be amin'ny milina lehibe kokoa izahay, amin'ny fanolorana serivisy tsara kokoa ho an'ny filan'ny mpanjifa, toy ny milina fanapahana laser, milina miondrika.
Taona vitsy lasa izay dia mifantoka bebe kokoa amin'ny vokatra tetik'asa trano fandroana izahay, toy ny dispenser servieta taratasy lehibe sy ny dabam-pako, toy ny bara fiarovana. Antoko koperativa ao anatin'izany ny gara, seranan-tsambo, sekoly ary toeram-pivarotana toa an'i Hilton sns.
Amin'ny maha tatatra gorodona vaovao ho avy, dia miara-miasa amin'ny tetikasa trano fonenan'ny governemanta Dubai izahay. Efa vita kaontenera roa ary izao miresaka ny filaharan'ny tetikasa trano 3 phase.
Tongasoa ny mpanjifa miforona manerana izao tontolo izao ho an'ny fiaraha-miasa mandresy-fandresena, tongasoa mba hifandray aminay raha mila bebe kokoa!